ဓမ္မအလင်းရောင် စာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲ နှင့် စာပေဟောပြောပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကြားRemarks by President Obama and President Thein Sein of Myanmar After Bilateral Meetingအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပုံတူ မဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်အား ဌာပနပိတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်Uzinblue and United States institute of Peace and Media and Conflict Research Team.TROPICAL CYCLONE MAHASEN Alternate Tracking Map	ဓမ္မအလင်းရောင် စာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲ နှင့် စာပေဟောပြောပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကြား
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိပုံတူ မဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်အား ဌာပနပိတ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်
Uzinblue and United States institute of Peace and Media and Conflict Research Team.
TROPICAL CYCLONE MAHASEN Alternate Tracking Map
မဟာဆန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (MAHASEN) အမည်ရှိ မုန်တိုင်းအခြေအနေကို ဒီလင့်မှာ Nawaday Art Gallery Opening Exhibition
ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချူပ် ဦးသန့် ပုံတူပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗိသုကာကြီး ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ယူဖွယ် တစ်ဦးတည်းသော ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင�...
ဓမ္မအလင်းရောင် စာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲ နှင့် စာပေဟောပြောပွဲအခမ်းအနားဖိတ်ကြား
Thursday, 23 May 2013 11:47
Tuesday, 21 May 2013 06:04
Sunday, 19 May 2013 08:25
Friday, 17 May 2013 04:03
မဟာဆန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (MAHASEN) အမည်ရှိ မုန်တိုင်းအခြေအနေကို ဒီလင့်မှာ Monday, 13 May 2013 08:12
Nawaday Art Gallery Opening Exhibition
Saturday, 11 May 2013 06:08
Thursday, 09 May 2013 16:48
မြန်မာတီဗွီ ၄ (MRTV 4) မှသတင်းထောက်များမှ လာရောက် အင်တာဗျုးကြရာ
Sunday, 26 December 2010 10:53 | Written by uzinblue | ၂၀၁၀ ခု ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် (၂) နာရီခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ တာမွေလေးရပ်ကွက်၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်းရှိ အောင်မြေဗောဓိဓမ္မရိပ်သာ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက် အတွင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် ဂီရိမုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးရံပုံငွေရရှိရေးအတွက်၂၀၁၀ ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ ညတွင် ဖြေဖျော်တင်ဆက်မည့် “ရှင်သန်နိုးထ အာရက္ခ” တေးဂီတ အနုပညာပွဲတော် အတွက်
Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 06:43)
Read more... Fund Raising Show for Giri Cyclone Victims
Thursday, 23 December 2010 19:09 | Written by uzinblue | Dear Dhamma Friends,
It is our immense pleasure to give you the news that Arakanese and Myanmar celebrities are going to organize Fund Raising Show for Giri Cyclone Victims in Arakan state of Myanmar on 30th December 2010 at Thuwanna Stadium from 5.00 to 9.00 PM. The above video is the announcement of the show in Myanmar.Last Updated (Thursday, 23 December 2010 19:25) Arakanese Fund Raising Show for Giri Cyclone Victims
Thursday, 23 December 2010 10:37 | Written by uzinblue | As you noted, the Cyclone namely “Giri” had hit severely to North-East Rakhine State on last October 2010 affecting more than 500,000 people leaving them in dire situations, causing loss of all their belongings such as families, homes, shelters, schools, professional facilities, mostly all the whole, not to say damages to Last Updated (Friday, 24 December 2010 18:49)
Read more... ၁၉-ကြိမ်မြောက် ပုဂံ၊ညောင်ဦး အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်၏သြ၀ါဒ
Wednesday, 22 December 2010 17:24 | Written by uzinblue | မြန်မာသက္ကရာဇ်-၁၃၇၂ နှစ် နတ်တော်ပြည့် အလိုတော်ပြည့်ဘုရားအဓိဌာန်ပြု ဆုတောင်းပွဲ တွင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တအရိယ၀ံသ သည် ၁၉-ကြိမ်မြောက် ပုဂံ၊ညောင်ဦး အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်၏သြ၀ါဒ၁.မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမူသာသနာ့နယ်မြေ မြန်မာတို့ရဲ့ အသည်းနှလုံးက ပုဂံပါပဲ။
Last Updated (Thursday, 23 December 2010 19:29)
Read more... Celebrating the Alodawpyei Buddhapuja
Friday, 17 December 2010 17:23 | Written by uzinblue | We are inviting the honour of your presence at the Annual Veneration Ceremony of the Ancient Historic Alodawpyei Buddha, going to celebrate during 14th and 15th of December, 2010 in Pagan Nyung Oo, Mandalay Division, supervising the Most Venerable Benefactor Alodawpyei and the Trustees of the Temple, donating 5000 in each number of Food, Water, Fruits, Flowers and Flames, offering White Parasol to the Pagoda by the devotees around different places of Myanmar, to proffer 10,000 Kyats to each Buddhist monk (total invited monks 528).We are announcing and
Last Updated (Friday, 17 December 2010 17:30)
Read more... (၁၉-ကြိမ်မြောက်)အလိုတော်ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်မည်။
Friday, 17 December 2010 16:30 | Written by uzinblue | အလိုတော်ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကျင်းပပြုလုပ်မည်နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းအလိုတော်ပြည့်ဘုရားပွဲတော်ကို မန္တလေးတိုင်း ပုဂံ/ညောင်းဦးမြို့၌ ၁၃၇၂-ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၁၄-၁၅)ရက် ၂၀၁၀ခုနစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၀-၂၁ ရက်များတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြု ကျေးဇူးတော်ရှင်အလိုတော်ပြည် ဆရာတော်နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များမှ ဦးစီး၍ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ဆွမ်း၊ ရေချမ်း၊ သစ်သီး၊ ပန်း၊ ဆီမီး၊ (၅၀၀၀)တို့ဖြင့် အလိုတော်ပြည့်ဗုဒ္ဓပူဇနိယထီးဖြူတော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားဖြင့် လှူဒါန်းပူဇော်ပြီး ပင့်သံဃာ (၅၂၈)ပါး တို့အား လှူဒါန်းဖွယ်ရာ ၀ထ္ထုများကိုလှူဒါန်းပူဇော်နိုင်ရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ပင့်သံဃာတစ်ပါးလျှင် ကျပ်(၁၀၀၀၀)ဖြင့် ငွေပဒသာပင် များ လှူဒါန်းပူဇော်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Last Updated (Friday, 17 December 2010 17:23)
Read more... အလိုတော်ပြည့် (Website) (၇-လ) ပြည့်မြောက်ပါပြီး ဒီ(၇-လ)အတွင်း မှာ Page Views Wednesday, 15 December 2010 19:00 | Written by uzinblue | အလိုတော်ပြည့် (Website) ရ-လ ပြည့်မြောက်ပါပြီး ဒီ(ရ-လ)အတွင်း မှာ Page Views စုစုပေါင်း ၇ သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီး Unique View ပေါင်း ၅ သောင်းကျော်ရှိနေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ မိသားစုများ လာရောက်ဖတ်ရူသူများ ကို လိုအင်းဆန္ဒာပြည့်ပါစေလို ဆုတောင်းမေတ္တာပိုသလျှက်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မိမိတို့ရယ် ပြည်တွင်း ပြည်ပ သာသနာ
ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အလှူတော်မင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ
စစ်တွေမြို့ ဆင်ကူးလမ်းရပ်ကွက်တွင် ကာတွန်းပြပွဲကျင်းပ